Ny isan'ny maty maty an-dranomandry tany India dia nahatratra 24
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny isan'ny maty maty an-dranomandry tany India dia nahatratra 24
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Safety • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny faratampony any Uttarakhand dia tratry ny vaky glacier tamin'ny alahady maraina lasa teo, namela olona 200 mahery tsy hita
Ny asa fanampiana sy famonjena dia hitohy mandritra ny alina
Ekipa iraisan'ny tafika nasionalin'ny valin'ny firenena, ny herin'ny fanjakana voajanahary ary ny tafika indiana manao ny asa famonjena.
Ekipa alika koa no ampiasaina hahitana ireo sisa velona
Ireo tompon'andraikitra ao amin'ny biraon'ny fitantanana ny loza voajanahary ao amin'ny distrikan'i Chamoli any IndiaNy fanjakana avaratr'i Uttarakhand any avaratry ny havoana dia nilaza fa 24 ny fatiny, lehilahy rehetra, efa tafaverina tao amin'ilay vaky glacier tamin'ny alatsinainy hariva teo.
Ny faratampon'ny fanjakana dia voan'ny fianjeran-dranomandry tamin'ny alahady maraina lasa teo, namela olona maherin'ny 200 very, ny ankamaroany dia mpiasa tamin'ny tetikasa roa famatsiana herinaratra.
"Ny razana dia efa azo averina eo anelanelan'ny toerana nipoahan'ny glacier sy niankandrefana mandra-pahatongan'ny faritra Srinagar ao amin'ny fanjakana," hoy ihany ny tompon'andraikitra.
Raha ny fanazavany dia hitohy mandritra ny alina ny asa famonjena sy famonjena.
Raha ny filazan'ny Lehiben'ny fanjakana Trivendra Singh Rawat, ekipa iraisan'ny National Disaster Response Force (NDRF), ny State Disaster Response Force (SDRF) ary ny tafika Indiana dia nanao ny asa famonjena.
Nahatratra ny marika 130 metatra ny ekipa tao amin'ny iray amin'ireo tionelina izay manodidina ny 1,800 metatra ny halavany. “Mety maharitra roa na telo ora vao tonga any amin'ny T-point ao anaty tionelina. Ezaka entina hanavotana ireo izay tafahitsoka ao anaty tionelina, ”hoy i Rawat nanampy.
Ilay tionelina izay eo akaikin'ny toerana misy vaky glasy dia voalaza fa feno savony sy potipoti-tongotra marobe. Milina mavesatra no ampiasaina hanadiovana ny tionelina sy hanavotana ireo mpiasa voafandrika ao anatiny.
Ekipa alika koa no ampiasaina hahitana ireo sisa velona, ​​raha misy izany.